I-GIS Kit, ekugqibeleni into elungileyo ye-iPad-Geofumadas
I-GIS Kit, ekugqibeleni into enhle ye-iPad
Agasti, 2011 Apple - Mac, Geospatial - GIS
Ekugqibeleni ndibona isicelo esihle kakhulu iPad ejoliswe ekubanjweni kwedatha ye-GIS kwintsimi.
Isixhobo sinakho izinto ezininzi, kwaye ushiya ama-diapers izicelo endizenzileyo njengaye GaiaGPS, I-GIS4Mobile, i-ArcGIS ye-iPad kunye ne-GISRoam; Le ndlela yokugqibela iyinamandla kodwa ingenabuhlobo yokusebenza kunye kwaye igxininise ngakumbi kuhlalutyo ngaphandle kokubanjwa.
GIS Kit Kukuphuhliswa garafa.comAbenzi beGPS Kit.Iza kwiinguqulelo ezimbini: i-GIS Kit kunye ne-GIS Pro; ngokusisiseko umahluko okwangoku kukusingathwa kwedatha .csv, ukuhanjiswa kweBluetooth, ukwabelana ngedatha yedatha kunye nokuthumela ngaphandle ukwenza iifayile; kuyo yonke imisebenzi iyafana. Ixabiso lenguqulelo yeKit ikwi- $ 99, enye iya kuchazwa kwiiveki ezi-5 ezizayo ngokwababhali bayo.
Makhe sijonge ukuba kulungile kangakanani:
1. Ukuhanjiswa kwedatha kwiGIS Kit
Isakhiwo sombutho sisekwe kwiiprojekthi, ezibandakanya ukwenziwa kwezinto ngokutsala okulula kweminwe kunokulawulwa ngokubhekisele kokuphambili, ukungafihli nto okanye ukucima / ukuqhubeka. Iyasebenza kwaye ilula, unokwenza, ukope, uhambise maleko. Ungachaza uninzi lweempawu njengoko kufuneka, kubandakanya uhlobo lokufota; inokuthathwa ngqo kwimeko yokusebenzisa i-iPad2 okanye ukhethe kulawulo lwemifanekiso; Ngaphandle kwayo ixhasa uluhlu (ibhokisi yebhokisi), i-boolean (jonga ibhokisi), umhla, i-url, inombolo yefowuni, phakathi kwabanye.
Ngokubhekisele kwimibala yeempawu, inembile, ivumela ukuba ukhethe ububanzi bomda, umbala, uhlobo lomgca ngendlela elula kunye nokubonakala kakuhle.
Njengeemephu zeemvelaphi, zide ngaphaya kweli lilindele:
Iimephu zeGoogle, kwiSitrato, iiStatellite kunye neifom zeHybrid.
Iimephu zeBing, kwisitrato, ifomethi kunye nefowpo.
Iimephu ze-Street Street ezivulekileyo kunye ne-Open Topo.
Ipro version iya kuxhasa iWMS.
I-ororeperenced georeferenced ifakwe ilayishwe kwifayili ye kmz.
Eyona nto ingayilanda kwi-cache ukuze ibone ingaxhunyiwe kwi-intanethi xa iya kwintsimi ngaphandle koxhumano lwe-intanethi.
2. Ukuqokelelwa kwedatha ebaleni
Kuyenzeka ukuba kulinganiswe umgama phakathi kwamanqaku amabini, okanye kwindlela ye-multipoint. Oku kunokuboniswa kwiimitha, iiyadi, iinyawo, kunye neemayile zasolwandle.
Ixhasa ukulungelelanisa iinkqubo kunye ne-lat / ende kunye ne-UTM. Ikwanayo ne-USNG kunye neMGRS eziziinkqubo ezisetyenziswa kakhulu eMelika, ziphantse zafana neWGS84.
Kule ndawo umiswe kuyo, ibonisa idatha enje ngesihloko, uququzelelo, isantya, njl. Kodwa ngaphandle kwalonto inokubamba idatha nge-GPS enayo ngaphakathi, kuba ayifuni unxibelelwano lwe-intanethi, kodwa uphawu oluqhelekileyo njengayo nayiphi na iGPS. Khumbula ukuba ukubanjwa kwenqaku leGPS ayingomlinganiso ngqo, kodwa umndilili wothotho lwemilinganiselo ngendlela yeepulse. I-GIS Kit inokhetho lokufaka idatha ngokucoca iikhrayitheriya.
Hluza ngomgama. Inokuxelelwa ukuba ingabambi idatha ukuba akukho ziphumo zide zomgama othile.
Hluza ngexesha. Ungayixelela ukuba ifake idatha rhoqo kwimizuzwana embalwa, nokuba ucofa akukho.
Icebo lokucoca ulwelo ngokuchanekileyo. Unokuyalelwa ukuba ufake idatha kuphela xa uluhlu lokuchaneka lugqithisiwe.
Icebo lokucoca ulwelo ngqo. Kukusebenza okubonelelwa yiApple kubaphuhlisi besicelo, apho inkqubo inyanzela isixhobo ukuba sikhangele kuphela ulwazi oluchanekileyo kwaye hayi amaqhosha alula.
Ukubanjwa kunokuba ngamanqaku, imigca okanye iipoligoni, kuxhomekeke kuqwalaselo lomaleko osetyenziswayo. Nje ukuba into ibanjiwe, iphaneli iyavezwa ukufaka idatha.
3. Ukuhlelwa kwedatha
Nje ukuba idatha iqokelelwe, hayi i-alphanumeric kuphela kodwa nejometri (umgca, inqaku, ipoligoni kunye nokulandela umkhondo) kunokuhlelwa. Nokuba ipholigoni inokuvavanywa ngokuyinxenye ngeGPS kwaye ezinye zinokuchazwa, kuluncedo kakhulu ukudibanisa i-GPS kunye nokutolikwa kweefoto xa iimeko ezineenkcukacha zikuvumela oko.
4. Iifomathi ezixhaswayo.
Kule ngqungquthela enhle, nangona kuyimfuneko ukucacisa ukuba isistim sokubamba i-GIS, ngoko ke unyango lwe-CAD okanye uhlalutyo kufuneka lwenziwe kwi desktop.
Rhweba ngaphakathi no Rhweba data evela ESRI (shp), Excel (cvs) Google Earth (KML / KMZ) kunye nesiqu nabanye Format GPS Exchange (.gpx) iifomati, bhekiselela kwezi nkqubo, kodwa le ingaba eveliswa phantse nasiphi na isicelo sangoku GIS.
Ityala le-kmz linomdla, kuba sele liyifomathi enomtsalane ngakumbi kune-shp yakudala, njengoko ixhasa idatha enjengeefoto ezinxulumene nentsimi kunye ne-orthophotos ze-georeferenced kunye ne-kml enye kwifayile efanayo. Le fomathi ikwamkelwe njengomgangatho we-OGC kwaye ixhasa iibits ezingama-32, ezigqitha iitafile zamandulo ze-arch .dbf nangona ngokweempawu ifuna ubuchule be-xml.
Iibhloko zingadluliselwa nge-imeyili, iTunes, iBluetooth kunye ne-iCloud.
Ngamafutshane, eyona nto ndiyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku ukuthatha ithuba nge-iPad ebaleni. Ijongeka ngokuthe tye kwaye inokubakho kwiiprojekthi ezisebenzayo apho ukushicilela kubaluleke ngaphezu kokuchaneka, njengokuthengisa izindlu nomhlaba, uluhlu lwezolimo, uphando lwezentlalo noqoqosho okanye iiprojekthi zamahlathi ...
Kuyenzeka kum ukuba kunganzima kakhulu ukuba umntu ebefuna ukusifaka kuvavanyo lwe-cadastral yasemaphandleni, kuba umfanekiso wesatellite unokukhutshelwa kwi-cache, emva koko uye ebaleni ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi. Kwezinye iindawo umfanekiso obonelelwe kuGoogle uhlangabezana neemeko ezichanekileyo zokuchaneka, nangona kunjalo, ukuba inayo i-orthophoto yayo inokulayishwa kwinkonzo ye-WMS okanye kwiifayile ze-kmz ukuya nayo ebaleni.
Ngelixa umlinganiso ulinganiswa, kuya kugcwaliswa ifayile ye-cadastral, kuya kuthathwa iifoto ezinxulumene noko, kunokwenzeka ukuba uzobe indawo etolika iifoto engadingi ndlela, zoba izakhiwo okanye amachibi, ukwahlula isityalo esisigxina okanye ukuhlela ifayile esele ikho. Akunzima kakhulu ukumisela yonke idatha ebandakanyiwe kwirejista yomhlaba kunye neendlela ezininzi, nokuba uqhagamshelo olulula lwe-3G idatha inokufikelela kwiserver yamacandelo ekwabelwana ngawo.
Kwimeko yovavanyo lwasedolophini, inokusetyenziswa njengomphelelisi, ukuphakamisa yonke imida enesikhululo esipheleleyo kunye nale nto yokudlala, ukutolika ifoto okanye ukulinganisa iimali zezakhiwo, zoba isakhiwo kwaye ugcwalise ifayile ye-cadastral okanye uphando lwentlalo noqoqosho. Ukuba sidibanisa amaxesha athatyathwa ngoochwephesha ukubhala phantsi incwadana, jonga uluhlu lweekhowudi, uthathe ifoto nenye ikhamera, emva koko uye eofisini, ugcwalise ifayile, uzobe umzobo ngesikali, ubale indawo eyakhiweyo, yenza izibalo kunye ngenisa idatha kwinkqubo… inokuba ewe, oku kunokuba nakho.
Masingathethi ezinye izinto eziphambeneyo, kuba usebenzisa me.com kunokwenziwa ukulandelela apho ochwepheshe bexesha, bachitha ixesha elingakanani, beyiphi indawo engafanelekileyo bayifumana ... nokuba apho isela elithatha i-iPad lihamba.
Ngolunye ulwazi http://giskit.garafa.com/.
Umhlaba ka-Google iPad KML
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ikhosi yeJava yokufunda ukususela ekuqaleni
Post Next Iveki kwiifoto ze-13Okulandelayo »
4 Uphendula kwi "GIS Kit, ekugqibeleni into elungileyo ye-iPad"
umntu uyayazi ukuba ndibahlawulisa njani ii-points shp kwiPro GIS Pro
UDavid Uribelarrea del Val uthi:
Ngaba uyazi ukuba yintoni ukuchaneka kweGPS ukusebenza ngaphandle? Ngaba kuyimfuneko ukuqhathanisa i-GPS ye-Bad Elf okanye uhlobo lwe-bluetooth?
Yenziwe nge-Apple iOS SDK, kwi-interface ebizwa ngokuba yi-Xcode.
Yiyiphi le sicelo eyenziwe?